ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်းရယ်၊ သမီးလေးရယ်၊မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေကြောင့် သူမရဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံနေပြီး အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ..လို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်း – Askstyle
ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်းရယ်၊ သမီးလေးရယ်၊မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေကြောင့် သူမရဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံနေပြီး အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ..လို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်း
“ခ်စ္လွစြာေသာ ခင္ပြန္းရယ္၊ သမီးေလးရယ္၊မိဘႏွစ္ပါးနဲ႔ ညီအကုိေမာင္ႏွမေတြေၾကာင့္ သူမရဲ႔ဘဝကၿပီးျပည့္စံုေနၿပီး အေကာင္းဆံုးအခုိက္အတန္႔ေလးကို ပုိင္ဆုိင္ထားပါၿပီ” လုိ႔ ဆုိလာတဲ့ အဆုိေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္း..Melody World သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကေနတဆင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားလာတဲ့ အဆိုေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္းကေတာ့ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ အသံေလးနဲ႔ ပရိသတ္အႀကိဳက္ သီခ်င္းေကာင္းေလးေတြကို သီဆိုတတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ခ်မ္းခ်မ္းကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြအျပင္ သူမရဲ႕ သမီးေလး ျမမိုးဂဂၤါကိုလည္း ရင္အုပ္မကြာ ေစာင့္ေရွာက္ေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခ်မ္းခ်မ္းက အခုဆိုရင္ သူမရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ သမီးေလး ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ေဆာင္ထားရၿပီး သာယာလွပတဲ့ မိသားစုဘဝေလး တည္ေဆာက္ေနလ်က္ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမအေပၚ ၾကင္နာဂ႐ုစိုက္တဲ့ခင္ပြန္းနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းက ဒီကေန႔မွာေတာ့ သူမတို႔ မိသားစုႀကီးရဲ႕ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အခိုက္အတံ့ကို မွ်ေဝေပးလာပါတယ္။ ခ်မ္းခ်မ္းက “ခရစ္စမတ္အတြက္ ကြ်န္မရဲ့အိမ္မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူတူ ..!!! အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဒါက ကြ်န္မဘဝရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ပဲ! ခ်စ္တယ္ အေမနဲ႔ အေဖ!!!. ခ်စ္လွစြာေသာ အစ္ကိုနဲ႔ အစ္မေတြ.. သမီးေလးရယ္ ခ်စ္လွစြာေသာ ခင္ပြန္းရယ္”ဆိုျပီး သူမရဲ့ အမွတ္တရေလးကို မွ်ေဝေပးလာပါတယ္။
ခ်မ္းခ်မ္းကေတာ့ သူမဘဝရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအစစ္အမွန္ေတြကို လက္ေတြ့ခံစားရင္း ဘဝရဲ့ ၾကည္နူးစရာ အခိုက္အတံ့ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းခ်မ္းတို့ မိသားစုေလး အခုလိုပဲ အျမဲထာဝရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစေနာ္။
“ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်းရယ်၊ သမီးလေးရယ်၊မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေကြောင့် သူမရဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံနေပြီး အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ” လို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်း..Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် လူသိများထင်ရှားလာတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပရိသတ်အကြိုက် သီချင်းကောင်းလေးတွေကို သီဆိုတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းချမ်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် သူမရဲ့ သမီးလေး မြမိုးဂင်္ဂါကိုလည်း ရင်အုပ်မကွာ စောင့်ရှောက်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချမ်းချမ်းက အခုဆိုရင် သူမရဲ့ ဒုတိယမြောက် သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ဆောင်ထားရပြီး သာယာလှပတဲ့ မိသားစုဘဝလေး တည်ဆောက်နေလျက်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမအပေါ် ကြင်နာဂရုစိုက်တဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချမ်းချမ်းက ဒီကနေ့မှာတော့ သူမတို့ မိသားစုကြီးရဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတံ့ကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။ ချမ်းချမ်းက “ခရစ်စမတ်အတွက် ကျွန်မရဲ့အိမ်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူတူ ..!!! အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒါက ကျွန်မဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ! ချစ်တယ် အမေနဲ့ အဖေ!!!. ချစ်လှစွာသော အစ်ကိုနဲ့ အစ်မတွေ.. သမီးလေးရယ် ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်းရယ်”ဆိုပြီး သူမရဲ့ အမှတ်တရလေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
ချမ်းချမ်းကတော့ သူမဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်တွေကို လက်တွေ့ခံစားရင်း ဘဝရဲ့ ကြည်နူးစရာ အခိုက်အတံ့တွေကို ပိုင်ဆိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းချမ်းတို့ မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမြဲထာဝရ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။